Taariikh Nololeedka Super Star Ravi Teja “Mass Maharaja” Qaybta 2-aad | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Super Star Ravi Teja “Mass Maharaja” Qaybta 2-aad
Taariikhda: October 13, 2017
Kusoo dhawaada qaybta labaad taariikh nololeedka Super Star Ravi Teja “Mass Maharaja” oo shacbiyad balaaran ku leh Koonfur Hindiya gaar ahaan shirkada Tollywood ee dhul weynaha Telugu ka jirto.
Hadii Aadan Aqrisanin Qaybta 1-aad Taariikhda Ravi Teja Fadlan RIIX HALKAAN
Ravi iyo awoodiia marka ay cirka gashay 2006 – 2011:
Sanadii 2006 Ravi Teja marnaba ma hilmaami karo madaama uu la shaqeeyay Director S. S. Rajamouli asigoo u sameeyay filimkii hirgalay Vikramarkudu.
Filimkaan wuxuu noqday midka lacagaha ugu badan soo xareeyo taariikh ahana ilaa iminka hadii sicirka maanta lagu jaan gooyo aflaanta Ravi Teja sameeyay waana Blockbuster weyn.
Ravi Teja filimkiisa Vikramarkudu labada door uu ku matalay Sathi Babu iyo Vikram Rathod wuxuu ku helay amaan taariikhi ah iyo shacbiyad balaaran.
Dhamaadkii 2006 Ravi wuxuu la yimid filimka Khatarnak oo ay la sameesay atirishada Ileana D’Cruz kaasi oo ganacsi ahaan siweyn u guul dareestay sheekadiisa reer Koonfur Hindiya wey iska diideen.
Sanadii 2007 Teja wuxuu mar sedexaad la shaqeeyay Director Srinu Vaitla waxayna la imaadeen filimka Dubai Seenu kaasi oo guul dhex dhexaad ah gaaray.
Sidoo kale 2008 wuxuu Teja la imaaday filimka Krishna ee uu sameeyay Director V. V. Vinayak wuxuuna filimkaan noqda Super Hit weyn oo culeeska Teja ka dajiyay.
Ravi Teja sidoo kale bishii August 2008 waxaa usoo baxay filimka Baladur waxaana la sameeyay atirishada Anushka Shetty balse nasiib daro Flop ayuu noqday sidoo kalena 2008 guul daro ayuu ku dhameestay Teja madaama si naadir ah asiga iyo Director Puri Jagganath filimkoodii Neninthe waayo heerkii laga filaayay ma gaarin meelaha qaar ayuu Average ka noqday.
Sanadii 2009 Ravi Teja waa markii uu si rasmi ah u noqday mada daaliyaha kowaad shacabka tiyaatarada ku xiran kadib markii uu la yimid filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Kick ee uu Director ka ahaa Surender Reddy waxaana atirisho ka ahayd Ileana D’Cruz.
Teja labadiisii filim ee u xigeen wey guul dareesteen kuwaas oo Flop noqdeen waana Anjaneyulu (2009) iyo Shambo Shiva Shambo (2010).
Ravi Teja wuu soo laba kacleeyay wuxuuna 2010 la yimid filimka Super Hit-ka weyn noqday Don Seenu wuxuuna ka mid noqday Hits-ka ugu weynaa Telugu sameeyay 2010.
Sanadii 2011 Ravi Teja wuxuu la midoobay Director Harish Shankar ayagoo la imaadeen filimka lala cajabay ee Super Hit-ka noqday Mirapakay.
Mirapakay sheeko ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Hindiga ah Main Hoon Na ee sanadii 2004 SRK hogaamiye ka ahaa wuxuuna filimkaan tiyaatarada saarnaa in ka badan 100-maalmood sidoo kalena gobolada qaar ee dhul weynaha Telugu Blockbuster ayuu ka noqday.
Laakiin 2011 guuldaro ayuu ku dhameestay madaama labadiisii filim ee ugu dambeeyeen Dongala Mutha iyo Veera Flop noqdeen.
Ravi Teja 2012 Ilaa Iminka Siyaasada Uu Adeegsado:
Ravi Teja wuxuu ku yabaalay doorashada aflaanta tayada wanaagsan markaas ayuu hareer maran aflaan nuxur leh wuxuuna doortay kuwo ganacsi ahaan guul dareesteen.
Filimkiisii kowaad 2012 Nippu iyo midkiisii labaad Daruvu waxay noqdeen kuwo ganacsi ahaan bur bureen oo Utter Flop ama Disaster ah.
Ravi Teja wuxuu la midoobeey saaxiibkiis Director Puri Jagannadh waxayna la imaadeen filimka Devudu Chesina Manushulu isagana ganacsi ahaan wuu bur buray waxayna ahayd markii sedexaad oo ar Ravi iyo Ieana D’Cruz isla shaqeeyaan balse markaan bur bur weyn ayay la kulmeen.
Ravi Teja dhaliil xoogan ayaa loo soo jeediyay sidoo kalena awoodiisii hoos ayay u dhacday fanka Telugu-na waxaa ka qabsadeen rag dhalin yar.
Caku ciil badanaa atoorihii awooda badnaa Flop-kiisii 6-aad oo xariir ah ayuu sameeyay madaama filimkiisii ugu dambeeyay 2012 Sarocharu uu bur buray waxaana filimkaan la sameesay Ravi atirishada Kajal Aggarwal waxaana Af Hindi ahaan loo bixiyay magaca Jabardast Aashiq.
Sidaa darteed asigoo culees xoogan saaran wuxuu la yimid filimkii Balupu ee sanadii 2013 soo baxay waxaana la jishay Shruti Haasan wuxuuna noqday Hit weyn waana midka uu kusoo laabtay oo uu culeeska isaga dajiyay.
Filimka Balupu waxaa magac ahaan Af Hindi lagu codeeyay oo lagu daawaday Jani Dushmann waana filim hirgalay oo Classic ah.
Ravi Teja wuu xasilay markii Balupu uu Hit weyn u noqday wuxuuna qaatay go’aan ah in sanadkii hal filim ama labo filim sameeyo ugu badnaan sidoo kalena uu joojiyo saxiixashada mashaariicda kala duwan oo dhulka galiyeen awoodiisa.
Ravi oo soo rogaal celiyay wuxuu 2014 la yimid filimka Power waxaana la jileen labada atirisho Hansika Motwaniand Regina Cassandra.
Power Hit weyn ayuu noqday waxaana saami ahaan laga helay 25.45 Crore dibad dal taasi oo Hit ka dhigtay madaama lacag yar lagu iibsaday xuquuqdiisa qeybinta cajaladaha.
2015 Ravi Teja iyo Director Surender Reddy waxay la imaadeen filimkoodii hirgalay Kick qaybtiisa labaad oo loo bixiyay Kick 2.
Ravi iyo Director Reddy Kick 2 lacag xoog badan ayay ka heleen ka hor inta aan tiyaatarada la saarin waxayna qaateen go’aan qaldan oo ah in macaashka ay hormarsadeen taasi oo sababtay in Kick 2 Disaster noqday ama bur buray markii tiyaatarada la saaray.
20 Crore ayay saami ahaan ka heleen kooxda cajaladaha qeybiyaan ayagoo 40 Crore ka badan ku iibsadeen taasina waxay sababtay in Kick 2 mashruuc ahaan guul dareestay.
Ravi Teja dhamaadkii 2015 wuxuu la yimid filimka uu ceebta isaga dhaqay Bengal Tiger kaasi oo Hit noqday waxaana la sameesay Tamannaah Bhatia.
Bengal Tiger 36 Crore ayuu suuqyada caalamka kasoo xareeyay waxaana saami ahaan laga helay 22 Crore sidaas ayuuna Hit dhameestiran ku noqday.
Super Star Ravi Teja hal sano wax filim ah ma sameynin micnaha 2016 oo dhan mashruuc lama imaanin sanadkaana wuxuu duubis ku waday labada filim ee kala ah Touch Chesi Chudu iyo Raja the Great.
Filimka Raja the Great oo uu Ravi Teja indhoole ama camoole ku jilaayo waa mid diyaarsan waxaana tiyaatarada la saari doonaa 19-ka bishan ama todobaadka dambe waana filim siweyn loo wada sugaayo.
Ravi Teja Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Ravi waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo Kalyani Teja oo uu sanadii 2002 guursaday sidoo kalena lamaanahan waxaa u joogaan labo caruur ah Mahadhan Bhupatiraju iyo Mokshadha Bhupatiraju.
Ravi wiilkiisa Mahadhan wuxuu dhashay 2006 haatana waa 11-jir sidoo kalena gabadhiisa Mokshadha waxay dhalatay 2003 waana 14-jir waana curada reerka.